Infographic: Atụmatụ ọhụrụ na-apụta Iji Nwee Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Na Mgbasa Ozi Google | Martech Zone
Na ya nke anọ na-enwe ọmụmụ ihe kwa afọ na ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa na Google Ads, Akpa na-atụ aro ka ndị na-ere ahịa e-commerce tụgharịa uche na atụmatụ ha wee chọta oghere ọcha. Companylọ ọrụ ahụ bipụtara nyocha ahụ na ya Akuko 2020 Benchmarks: Mgbasa ozi Google na Rlọ nkwari akụ, ihe omumu zuru ezu banyere oru ntaneti ahia na Mgbasa ozi Google.
Nchọpụta Sidecar na-egosi isi ihe mmụta maka ndị na-ere ahịa ịtụle na 2020, ọkachasị n'etiti gburugburu mmiri mmiri nke mgbawa COVID-19 mepụtara. 2019 na-asọmpi karịa mgbe ọ bụla, mana ndị na-ere ahịa nwere ike ịnọgide na-enwe ego site na ime mgbanwe na ihu igwe, na-elekwasị anya na atụmatụ ndị na-ege ha ntị, na ibute mmụba na-ebute ụzọ, ma ọ bụghị nnukwu mmụba. Mkpụrụ ahụ iji gbanwee bụ isi ihe na-eme ka azụmahịa na-agagharị ma na-akwado ndị na-azụ ahịa n'oge a niile.
Mike Farrell, Onye isi oche nke Integrated Digital Strategy na Sidecar
Ihe Ntanye nke Ọrụ Mgbasa Ozi Google:
Sidecar kpughere ihe ndị na-emetụta arụmọrụ ndị na-ere ahịa na 2019:
Ntughari ego - Ndị na-ere ahịa mebere Mgbasa ozi Google ka ha na-emefu na 2019, na-ebute ọrụ ndozi dị ala na Shozụ ahịa Google ma weghachite mkpọsa ọchụchọ ha akwụ ụgwọ maka ego efu.
Ibu ụzọ na arụmọrụ - Ndị na-ere ahịa mesiri ike na nchọta a na-akwụ ụgwọ, n'otu akụkụ site na itinye ego na mgbasa ozi mkpanaka dị ọnụ ala, na-eduga n'ị nweta nnata ego yiri nke ahụ karịa afọ.
Asọmpi si Amazon - Asọmpi a wedatara Google conversionzụ ahịa mgbanwe udu gafee ngwaọrụ, na-amanye Jeriko ka uptick emefu ịnọgide na-enwe revenue revenue.
Mesiri ike na atụmatụ ndị na-ege ntị - Ndị na-ere ahịa mụbara elebara anya na ọtụtụ ndị na-ege ntị na-ege ntị ka eserese Google Mgbasa ozi ka mma na ọkwa niile nke ịzụrụ ihe.
Achọghị ihu na Google - Ndị na-ere ahịa nọgidere na-enweta ego site na ogologo oge Google Ads platform, ma na-achọkwu uru site na nyiwe mgbasa ozi ọhụụ, dịka Amazon na Pinterest.
N'ileghachi anya n'ihu, Google ga-anọgide na-akpụzi usoro mgbasa ozi Google ya iji merie ya na ịre ahịa azụmaahịa dịka Facebook, Instagram, na Amazon.
Nchọpụta Key nke Retail Google Ads Benchmarks:
Ndị na-ere ahịa bilitere na asọmpi asọmpi. Ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ nke ọma na nyocha a na-akwụ ụgwọ, na-echekwa 8% na-akwụ ụgwọ kwa afọ karịa afọ, ebe ha na-akwọ ụgbọala yiri ego. Ndị na-ere ahịa nwere ike tinye ego nkwụnye ego nke Google site na 7% na mmụba 7% na-akwụ ụgwọ.
Mgb ere ahịa na-ere ahịa gbanwere. Googlezụ ahịa Google mebere 80% nke mmefu ego nke ndị na-ere ahịa n'etiti ọwa abụọ a, ebe ọ na-arụ ọrụ na-eto eto n'ịgbanwe ndị na-azụ ala. Ọ bụ ezie na nchọta a na-akwụ ụgwọ nwere ihe fọdụrụ na 20% nke mmefu, ndị na-ere ahịa na-abịakwute mgbasa ozi ndị a na nnukwu granularity iji na-adọta ndị na-azụ ahịa nke ọma na oke olulu ahụ.
Ihe ngosi nke Shozụ ahịa Google nke Amazon ruru 60% maka B2B, ụlọ & ụlọ, na ụlọ ahịa ahịa na Q3 2019. Mmetụta echiche Amazon jụrụ ntakịrị na Q4, na-ekwe ka ndị na-ere ahịa merie ụfọdụ ngosi n'oge oge dị egwu nke afọ.
Mmetụta echiche Amazon kpaliri ntakịrị na nyocha akwụ ụgwọ na 2019, na-efegharị na 40% ma ọ bụ obere maka ndị ahịa niile enyocha. Ndị na-ere ahịa na ahụ ike na ịma mma na ụlọ & vetikal hụrụ ka echiche Amazon na-ada site na mkpokọta pasent 7 ruo 8 na ngalaba ha karịa 2019. Nchọpụta ndị a na-egosi na nyocha akwụ ụgwọ nwere ike ịbụ ngwa bara uru maka ndị na-ere ahịa iji nagide Amazon na ndị asọmpi ndị ọzọ ' ọnụnọ na SERP akwụ ụgwọ.
Prime Day na-enye ndị na-ere ahịa ohere ọhụụ na Mgbasa ozi Google. A hụpụtara uto afọ na afọ na ntinye ego n'ofe ngwaọrụ n'ime izu izu nke ụbọchị ụbọchị ụbọchị na Primezụ ahịa Google. Maka ịzụ ahịa ịzụ ahịa na mkpanaka, enwere ọganihu afọ na-agafe n'ofe KPI (4% maka iwu, 6% maka clicks, na 13% maka ego ha nwetara). Na mgbakwunye, mgbasa ozi mkpanaka na-akwụ ụgwọ na-ahụ nnukwu uru site na mmụba nke 25% na iwu na 28% na ego ha nwetara n'afọ karịa afọ.
Nweta zuru akụkọ na ị nwere ike nweta KPIs maka gị kpọmkwem mkpọsa vetikal, gụnyere isi na ọnọdụ impacting mkpọsa odida obodo tinyere Sidecar si na-atụ aro.
Budata Akuko Sidech's 2020 Benchmarks
Sidecar na-enye ezigbo arụmọrụ maka ndị na-ere ahịa na ụdị. Teknụzụ nwere teknụzụ Sidecar na data nkeonwe, yana ọtụtụ afọ nke ịzụ ahịa arụmọrụ, na-enyere ndị ahịa ya aka ịmepe ikike niile siri ike taa, ịzụ ahịa, mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Tags: 2020amazonuwe mgbasa oziinfographic benchmarkbenchmark akụkọkọmputa mgbasa oziCOVID-19download akụkọonyinye onyinyemgbasa ozi googlegoogle mgbasa ozi na mkpọsagoogle adwordsgoogle ịzụ ahịaihe omume ntụrụndụmobile mgbasa oziakwụ ụgwọ ọchụchọpdfịre ụlọ na ụlọọnụahịa benchmark reportmgbasa ozi google mkpọsa